राजधानीवासीको कहर: गिद्ध र कागले घरमै ल्याउँछन् सिनो, दुर्गन्धले बस्नै मुस्किल [फोटो/भिडियो]
काठमाडौं – राजधानीको मध्य भागमा पर्ने कुलेश्वर, टेकु, त्रिपुरेश्वर, थापाथली तथा कुपण्डोल क्षेत्रका बासिन्दा वाग्मती नदीबाट आउने ढलको दुर्गन्धले आजित बनेका छन् ।
नदीमा पानीभन्दा बढी ढल बग्छ । किनारमा फोहोरका डंगुर छन् । कुपण्डोल–थापाथली वाग्मती पुल हुँदै यात्रा गर्ने यात्रुहरू नाक नथुनी हिँड्न सक्ने अवस्था छैन ।
घरबाट निस्किने फोहारदेखि मरेका गाईवस्तु तथा कुकुरको सिनो किनारमै फालिएका छन् ।
वाग्मती सरसफाई अभियानले ३००औं हप्ता छुने बेला भइसक्यो, तर यस क्षेत्रमा अनुभूति हुने गरी सरसफाईको प्रभाव देखिएको छैन। आसपासका वासिन्दाको फहोर र ढल निर्धक्कसँग वाग्मतीमै मिसिइरहेको छ ।
‘एक-दुईपटक आएका थिए, त्यसपछि कोही आएका छैनन्,’ त्रिपुरेश्वरबाट सानेपातर्फ जाने पुलको छेवैमा बस्ने हरि सापकोटाले भने, ‘हामी पनि फोहोर नदी किनारमा नै फाल्ने हो । फोहोर लिन आउँदैनन्, अन्त फाल्ने ठाउँ पनि छैन, कहाँ फाल्नु त ?’ उनी यस क्षेत्रमा बस्दै आएको १० वर्ष बितिसकेको छ ।
यस्तै गुनासो कुलेश्वरस्थित पुलको छेउमा घर भएकी सरिता राईको पनि छ । काखमा सानो छोरा च्याप्दै गरेको अवस्थामा भेटिएकी उनले भनिन्, ‘सिनो पनि यहीँ फालिएको छ । गिद्ध र कौवाले घरघरमै ल्याउँछन्, हामीलाई बाँच्नै गाह्रो छ । सफा गर्न कोही आउँदैनन् । फलफूल बजारबाट निस्केको सबै फोहोर यही किनारमा फाल्छन्, गन्हाएर बस्नै गाह्रो भो । घर नै बेचेर अरु ठाउँमा सर्ने सोचेका छौं ।’
त्यहाँ नजिकै रहेको बंगुर बधशालाले पनि दुर्गन्ध बढाएको छ ।
प्रदूषण र दुर्गन्धले गर्दा त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरू बिरामी पनि पर्ने गरेको पुलमा काम गर्दै गरेका ज्यामी रामबाबु यादवले बताए ।
यस्तो समस्या भएको वर्षौं बितिसक्यो, तर न सरकार न त स्थानीय कोही पनि यसबारे गम्भीर बन्न सकेका छैनन् ।
हेर्नुहोस्, भिडियो :
थप तस्वीरहरू :
मंसिर १७, २०७५ मा प्रकाशित
लोकान्तर मल्टीमिडिया संवाददाता अर्याल सुरक्षा/अपराध तथा समसामयिक विषयमा समेत कलम चलाउँछन् ।
त्यो त्रासदीपूर्ण भूकम्पका बेला काठमाडौंका सीडीओ एकनारायण अर्यालको भोगाइ
‘प्रधानमन्त्रीज्यू ! धूलो र मास्क हेर्न सडकमा आउनुस्, सिंहदरबारबाट देखिँदैन’ [भिडियोसहित]
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनमा समस्या, प्रशासनसँग छैन बदर भएका र हुनुपर्ने नागरिकताको अभिलेख !
वाउ, चकलेट पानीपुरी !
११ हजारभन्दा बढी कर्मचारी माग्दै लोकसेवा आयोग काठमाडौं– लोकसेवा आयोगले केही दिनभित्रै स्थानीय तहका लागि ११ हजार ३४६ जना कर्मचारी माग गर्दै सूचना निकाल्ने भएको खबर आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएको छ । संघीय...
बेचियो मैतीदेवी मन्दिरको जग्गा, कर्मचारी र भूमाफियाको मिलेमतो
यसकारण फास्ट ट्र्याकको निर्माण अवधि लम्बिने
राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था खारेज
न्यायाधीशको चलाखी–कारबाहीबाट बच्न राजीनामा दिए, अनिला झालाई राजपाको नेतृत्व
तपाइँलाई थाहा छ ? भटमासको फाइदा मात्रै छैन, बिष समान पनि हुन्छ